I-Levonorgestrel (797-63-7): njani isebenza ngayo, isebenzise, ​​imiphumo | AASraw
/Blog/Levonorgestrel/Levonorgestrel: njani isebenza ngayo, isebenzise, ​​iziphumo ezibi
ezaposwa ngomhla 07 / 12 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Levonorgestrel.
Yonke into malunga ne-Levonorgestrel powder
1.Yintoni i-powonorgestrel powder
3.Usebenza njani uVononorgestrel?
I-4.Yiyiphi imilinganiselo ye-levonorgestrel kufuneka uyenze
5. Yintoni omele uyilandele ukuba i-Levonorgestrel ilahlekile
6.Ziziphi iziphumo zecandelo levonorgestrel?
7. Yintoni omele uyazi ngaphambi kokusebenzisa i-Levonorgestrel?
I.Levonorgestrel powder Abalinganiswa basisiseko:
1. Yintoni i Levonorgestrel powder?
I-Levonorgestrel powder yi-progesin eyasetyenziswa njengokukhulelwa komzimba, kuthengiswa phantsi kwegama lohlobo lwe-B B phakathi kwabanye. Ku luncedo kwiiyure ze-120 njengokulawulwa kokuzalwa kongxamiseko emva kwesondo esingakhuselekanga okanye emva kokungaphumeleli kwindlela enye yokulawula ukuzalwa (njengokwahlula ikhondom, okanye ukulahleka kwe-2 okanye iipilisi zokulawula ukuzalwa). Isebenza ngokuthintela iqanda lomfazi ekuphuhliseni ngokupheleleyo. Inokuthi ithintele ukunamathiselwa kweqanda lomfazi eludongeni lwesisu. kodwa ayiyi kuthintela ukusasazeka kwintsholongwane ye-immunodeficiency virus (i-HIV, intsholongwane ebangela ukufumana i-immunodeficiency syndrome [AIDS] kunye nezinye izifo ezithathelwana ngesondo. I-Levonorgestrel CAS: I-797-63-7 ithengiswa ngokubanzi njengentsebenziswano yokukhulelwa ngomlomo phantsi kwamagama amaninzi e-Alesse, Triphasil kunye neMin-Ovral. Kusebenza ukukhusela ixesha elide lokukhulelwa.
Igama leKhemikhali: Levonorgestrel powder
Iintetho: 13-ethyl-17-alpha-ethynyl-17-beta-hydroxy-4-gonen-3-one ;
Indawo yokunyibilika: 206 ° C
2. Levonorgestrel Izinzuzo
I-Levonorgestrel CAS: I-797-63-7 inikezela ngabasebenzisi abaninzi amanzuzo angenayo yokukhulelwa komzimba: inani lokuphuma kwexesha lokuphuma kwindoda kunye nenani leentsuku zokuphuma kwindoda kuncitshisiwe, okwenza kube lufanelekile unyango lwe-menorrhagia (ukunyuka kwegazi okunzima).
I-Dysmenorrhoea (isisu esibuhlungu) kunye neempawu zangaphambili zikhululekile. Ukongezelela, i-Levonorgestrel inikeza ukhuselo kwi-endometrium ngelixa le-hormone yonyango yokutshintsha. Ukukhululwa kwendawo ye-levonorgestrel kwisigxina se-uterine kubangela ukunyanzeliswa okunamandla kwe-epithelium ye-endometrial njengoko i-epithelium ingenakukhupha kwi-estradiol ekhutshwe kwii-ovari. Oku kubakho ukunciphisa ukulahleka kwegazi kwinyanga. Zonke iipateni zokuphuma kwegazi ziyabonakala phakathi kwabasebenzisi beLevionorgestrel; Nangona kunjalo, ininzi yabasetyhini abanamava amaninzi aqhubekayo. Iinyanga zokuqala zokusetyenziswa zihlala zibonakaliswa ngokungaqhelekanga, ukuphuma kwegazi, apho kwiimeko ezininzi zixazulula ngokukhawuleza. Imodeko yokuya esikhathini kunye nokuzala kuya kubuya kwinqanaba emva kokuba uLevonorgestrel isuswe. Ukusebenza kokukhulelwa kwangoko kuphezulu kunye ne-5-year failure rates ye-0.5-1.1 ngabasebenzisi be-100. Inani elipheleleyo lokukhulelwa kwe-ectopic liphantsi, njengalowo mgangatho ngabasebenzisi be-1000. I-Levonorgestrel isebenza ngokulinganayo kuwo wonke amaqela kwaye umzimba womzimba awunxulumene nokuhluleka kwendlela. Kwiinkcubeko zaseNtshona eziqhubekayo phakathi kwabasebenzisi be-Levonorgestrel CAS: I-797-63-7 iyafana naleyo yezinye iindlela zendlela yokukhulelwa kwexesha elide. Ukususwa kwangaphambili kweso sixhobo kudla ngokudibanisa nokuphuma kwexesha lokunyuka kokuhamba kweentlungu kunye nentlungu, njengakanye nezinye iindlela zesikhathi eside zokukhulelwa, kwaye ziqhelekileyo kwiqela elidala kakhulu. Xa belulekwa ngokwaneleyo malunga nobunzima be-oligo- okanye i-amenorrhoea, abaninzi abafazi bazimisele kakhulu ukwamukela ubomi ngaphandle kokuya esikhathini. Umngcipheko wokususwa kwangethuba ungabonakaliswa ngokunciphisa ukulungiswa kwangaphambili kokungeniswa kwangaphambili, okuphawulekayo kwandisa ukwaneliseka komsebenzisi. Ukwaneliseka komsebenzisi kunxulumene kakhulu nolwazi olunikezwe ngexesha lika-Levonorgestrel. Ngaloo ndlela, iinzuzo ze-levonorgestrel zenza indlela efanelekileyo kakhulu yokukhulelwa kwabafazi abaninzi.
3. U-Levonorgestrel usebenza njani?
I-Levonorgestrel CAS: I-797-63-7 ifana nephebhulethi ukuthatha ngomlomo. Ukuba uthatha i-levonorgestrel njengomkhiqizo omnye wethebhulethi, thabatha i-tablet enye ngokukhawuleza kwiiyure ze-72 (iintsuku ze-3) emva kokulala ngesondo esingakhuselekanga. Ukuba uthatha i-levonorgestrel njengomkhiqizo weebhulebhe ezimbini, thabatha i-tablet enye ngokukhawuleza kwiiyure ze-72 emva kokulala ngesondo esingakhuselekanga kwaye uthathe i-dose yesibili iiyure ze-12 kamva. U-Levonorgestrel usebenza kakuhle xa kuthathwa ngokukhawuleza emva kokulala ngesondo esingakhuselekanga. Ukuba uhlanza ngaphantsi kweeyure ze-2 emva kokuba uthathe i dovonorgestrel, qhagamshelana nogqirha wakho ukuba abuze ukuba ufuna ukuphinda le dose. Emva kokuba uthabathe le nyilisi, ixesha apho ixesha lakho liza kwaye ubuninzi obunokuthi uguqule. Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ixesha lakho lingaphezulu kweentsuku ze-7 ngokukhawuleza. Unokufuna ukuba uthathe uvavanyo lokukhulelwa. Ukuba uthabatha umkhiqizo ophezulu kwi-self-treatment, funda zonke izikhokelo kwiphakethi yomkhiqizo ngaphambi kokuba uthathe le nyilisi. Ukuba unemibuzo, xela kumakhomistiki wakho. Ukuba ugqirha wakho umisele le nyilisi, yithatha njengoko iyalathwayo. La mayeza angasebenzanga kakuhle kubafazi ngaphezu kwesisindo esithile (umzekelo, ngaphezu kwamakhilogremu ayi-164 okanye i-74 kilogram), okanye ukuba uye wasebenzisa ezinye iyeza kumyanga odlulileyo. Esi siphumo singabangela ukukhulelwa. Thetha nogqirha wakho ukuze uthole iinkcukacha ezithe vetshe kwaye ubone ukuba le nyeza ifanelekile yini (jonga kwakhona iCandelo lokuHlangana kweziDakamizwa).
Levonorgestrel I-CAS: I-797-63-7 inokumiselwa kwezinye izinto. Buza ugqirha wakho okanye umsemistri ngolwazi olungakumbi.
4. Nguwuphi umlinganiselo we-levonorgestrel omele uwathathe?
I-Levonorgestrel CAS: I-797-63-7 ifom yefilda kunye ne-dose ye-1.5mg kufuneka ithathwe ingaphezu kweeyure ze-72 emva kokulala. Isebenza kakhulu kwiiyure ze-24.
I-regomen ye dose yodwa: Thatha i-1.5 mg tablet ngokukhawuleza kwixesha le-72 yezesondo ezingakhuselekanga okanye xa ukulawula ukuzalwa kungaphumeleli.
I-reggae ye-dose ezimbini: Thatha i-tablet ye-0.75 mg ngokukhawuleza kwixesha lee-72 zezesondo ezingakhuselekanga okanye xa ukulawulwa kokubeleka kwehluleka, kulandelwa kweyesibini 0.75 mg tablet 12 iiyure emva koko.
5. Yintoni omele uyenze xa ulahlekile Levonorgestrel umyinge?
Funda kwaye ulandele le miyalelo ngokucophelela njengoko ulahlekelwa umyinge uya kwandisa umngcipheko wokukhulelwa. kwaye ubize ugqirha wakho ukuba unemibuzo.
Ukuba uphoswa ipilisi enye esebenzayo, thatha ngokukhawuleza xa unako. Emva koko thabatha iphilisi yakho elandelayo ngexesha eliqhelekileyo. Oku kuthetha ukuba ungathatha iipilisi ezimbini ngolunye usuku. Ukuba uphoswa ezimbini iipilisi ezisetyenziswayo ngeveki 1 okanye i-2, thabatha iipilisi ezimbini ngokukhawuleza ukuba unako kwaye ezimbini zipilisi ngosuku olulandelayo. Qhubeka uthatha ipilisi enye ngosuku uze uqede ipakethe. Sebenzisa olunye uhlobo lokulawulwa kokuzalwa kwiintsuku ezisixhenxe emva kokuphosa idosi. Ukuba uphoswa iipilisi ezimbini ezisetyenziswayo kwiSonto 3: Usuku lwe-1 luqala-Phonsa zonke iipilisi zakho uze uqale ipakethi entsha ngomhla omnye. NgeCawa qalisa-Qhubeka uthatha ipilisi enye ngosuku ukuya kwiCawa, uze uphonsa yonke ipakethe uze uqale ipakethi entsha ngaloo mini. Ukuba ulahlekelwa iipilisi ezisebenzayo ezintathu kwiSonto 1, 2, okanye 3, uphonsa yonke ipakethi kwaye uqale ipakethi entsha ngosuku olufanayo ukuba ungumhla wokuqala we-1. Ukuba uqala ngeCawa, qhubeka uthatha ipilisi yonke imihla kude kube ngeCawa. NgeCawa, phonsa ngaphandle kwepakethe uze uqale ipakethi entsha ngaloo mini. Ukuba uphoswa iipilisi ezimbini okanye ngaphezulu, awukwazi ukuba nexesha ngenyanga. Ukuba ulahlekelwa ixesha leenyanga ezimbini emva komgca, biza ugqirha wakho kuba unokukhulelwa. Ukuba uphoswa ipilisi yokukhumbuza, uyilahle kwaye uqhubeke uthatha ipilisi yekhumbuzo ngosuku ngalunye uze upake umthwalo. Iipilisi ezininzi ozilahlekileyo, unako ukuba uphephe igazi.Ukuba ulahlekelwa ngamaxesha amabini emgceni, biza ugqirha wakho ukuze uvavanyo lokukhulelwa ngaphambi kokuba uthathe iipilisi. Gcina i-Levonorgestrel CAS: 797-63-7 kwisitya esivaliweyo kwiqondo lokushisa, ngaphandle kobushushu, umswakama kunye nokukhanya okuthe ngqo.
6. Ziziphi iziphumo zecala levonorgestrel?
I-Levonorgestrel CAS: I-797-63-7 ingabangela ezinye iziphumo ezimbi xa zisetyenziselwa ukukhulelwa kwimeko engxamisekileyo. Hlola kunye nogqirha wakho okanye umsetyenzana ngokukhawuleza ukuba kukho naziphi iziphumo ezilandelayo:
Iziphumo eziqhelekileyo ze-levonorgestrel zingaquka:
Intloko okanye i-migraine
Ukulahlekelwa ngumdla kwisini
Ubuhlungu besisu okanye intlungu
Isisu esimoshakele; ukuziva okanye ukugula
Ukuphuma kwintsholongwane engavumelekanga okanye ukuphawula
ixesha elide okanye elinde
ukuyeka ukuphuma kwindoda
ukuphuma kwegazi phakathi kwexesha
Iziphumo ezincinci ezibi kakhulu ze-levonorgestrel zingaquka:
intloko, isisulu, isisu, okanye isisu;
ukucotha okanye ukukhawuleza kwentliziyo
ukuphaphaza okungavamile okanye ukutyumla
ukubetha kwesini okanye isini somzimba
umkhuhlane omhlophe okanye obomvu
umxhaka omhlophe, ococekileyo wesisu kunye nomlilo ocolileyo okanye ongekho
Imiphumo engqongqo engakumbi efuna unyango ingabandakanya:
Imfiva okanye iimpawu ezifana nezifo
iintlungu ezinzima okanye ubuhlungu be-pelvic;
Inwele okanye isifo sekhanda ngokukhawuleza
Ukuqhwala kwesikhumba okanye amehlo
Ubuhlungu, ukuvuvukala okanye ukufudumala emlenzeni
intlungu ngexesha lokwabelana ngesondo;
Ubunzima ngokuthetha, ukuhamba okanye ukulinganisela
Akukho ixesha lokuya esikhathini ukuya kweeveki ezintandathu ngexesha lokusetyenziswa
isikhumba esiluhlaza, ubuthathaka, ukululaza okanye ukuphuma kwegazi;
ukuphuma kwegazi lomzimba osisigxina okanye oqhubekayo, izilonda zesisu, utywala lomzimba olunamanzi, ukungcola okwenzakalayo, okanye okungaqhelekanga;
ubuhlungu obukhulu kwicala lakho okanye kwisisu esezantsi;
Ukuvuvukala ubuso, imilomo, iinkophe, ulwimi, izandla kunye neenyawo Ukuphendula okufana nokukhwabanisa isikhumba, ukunqanda, ukuvuthwa,
ukuvuvukala ubuso, imilomo okanye ulwimi
Oku akusiyo uluhlu olupheleleyo lweempembelelo kwaye abanye bangenzeka. Tshela ugqirha wakho okanye umseli-mveliso malunga naluphi na umphumo wesiganeko okanye ongathandekiyo. Ungabika iziphumo ezimbi kwi-FDA kwi-1-800-FDA-1088.
Ngaphambi kokusebenzisa Levonorgestrel I-CAS: I-797-63-7, ingozi yokuthatha i-Levonorgestrel kufuneka ilinganiswe ngokulungileyo. Esi sinqumo wena nodokotela wakho oya kwenza. Kulo mayeza, oku kulandelayo makuqwalaselwe:
I-Levonorgestrel ayifanele isetyenziswe ukuba sele sele ukhulelwe okanye uceba ukukhulelwa kungekudala. Izithuba zokukhulelwa kwangaphambili kufuneka zilawulwe ngaphandle kokuthatha le mayeza.
Akukho zifundo ezaneleyo kwabasetyhini ekunqumeni ingozi yabantwana xa usebenzisa i-Levonorgestrel ngexesha lokuncelisa. Ukulinganisa iingeniso ezinokuthi zibhekiselele kwiingozi ngaphambi kokuba uthathe uLevionorgestrel ngelixa uncelisa.
Ukusetyenziswa kwe-Levonorgestrel kunokubangela ukuba i-moderation izuze ukufumana ubunzima obunzima kwaye ngoko kufuneka isetyenziswe xa ulunzima okanye unobandezeleka obubangelwa ukukhuluphala.
Ukusetyenziswa kweLevionorgestrel, ngokukodwa ixesha elide, kunokunyusa amathuba okufumana isifo. Nayiphi na imeko yokusuleleka emva kokusetyenziswa kweliyeza kufuneka lixelelwe kugqirha.
Tshela ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na into engavamile okanye eyamkelekanga kwiliyeza okanye nayiphi na amayeza. Kwakhona xelela unonophelo lwenkonzo yakho yokhathalelo lwempilo ukuba unayo nayiphi na iindidi zeentlungu, ezifana nokutya, idayi, izilondolozo okanye izilwanyana. Imveliso engekho myalelo, funda iilebula okanye iipakethe zephakheji ngokucophelela.
Bika iziganeko zezifo ezinjenge-asthma, isifo sokuhluthwa, i-migraine, izifo zentliziyo kunye nemithanjeni yegazi njl. Ugqirha ngaphambi kokufumana le mayeza.
I-Levonorgestrel CAS: I-797-63-7 iyaziwa ukusebenzisana namayeza amaninzi onokuthi uthathe ukuthatha. Bika ukusetyenziswa kwawo onke amayeza kuquka namakhambi kunye nezibonelelo kumgqirha
tags: ukuthenga i-Levonorgestrel powder, Levonorgestrel powder
Izilwanyana ze-Alzheimer (izidakamizwa ze-AD): J147, i-CMS121, iCAD31	I-IDFP (615250-02-7): Imiphumo, Isisombululo, Iingxelo